Andrea ဆံပင်ပေါက်သန် အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : ၄၂ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်:4(+1)
Andrea (Made in Japan)(ဆံပင်ပေါက်ဆေးသန်ဆေး)ဆံပင်ပါးသူများဆံပင်အပေါက်နှေးသူများဆံပင်ကျဲသူများဆံပင်ကျွတ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးကောင်းလေးပါရှင်နေ့စဉ်အသုံးပြုပေးပါကတစ်လလောက်တွင်ဆံပင်နုများပြန်ပေါက်လာပါမယ်ရှင်ဆံပင်ကျွတ်သူများ ခေါင်းလျော်ရေထဲထည့်လျော်ပေးခြင်းဖြင့် ဆံပင်အကျွတ်နည်းသွားပါမယ်ရှင်အသုံးပြုပုံ- ခေါင်းလျော်ရည်ထဲသို့နှစ်စက်သုံးစက်ထည့်၍ တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်လျော်ပေးပါ။နေ့စဉ်ဆံပင်ပါးနေသောဦးရေပြားပေါ်သို့ဆေးကိုအနည်းငယ်ထည့်ပေးပါ။ထို့နောက်ညင်သာစွာဦးခေါင်းကို မိနစ်အနည်းငယ်နှိပ်နယ်ပေးပါ။ကျား မ မရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်​။​ဈေးနှုန်း- 12000ph: 09961326446 (Viber)/09790763877ရန်ကုန် မန္တလေး ​နေပြည်​​တော်​ နှင့်​ ကျန်​မြို့​ပေါင်း (၂၀) ​ကျော်​ အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါသည်။ပစ္စည်း​ရောက်​​မှငွေ​ချေစနစ်​ဖြစ်​ပါသည်​။အခြား​သောမြို့များသို့ ဘဏ်​ထဲ​ငွေလွှဲဝင်​သည်​နှင့်​နီးစပ်​ရာကားဂိတ်​သို့ပို့​ပေးပါသည်​။
When you call, don't forget to mention that you found this ad on ipivi.com I do not wish to be contacted by telemarketers or representatives of any other website.
Eyebrow Cushion Cara
ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ ယခုကြော်ငြာကို ipivi.com မှတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်မမေ့ပါနဲ့။
အမည်: Andrea ဆံပင်ပေါက်သန်
သတိထားပါ။ရောင်းချသူအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မရေရာပါက ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းမပြုပါနဲ့။ငွေမပေးချေမီ ကုန်ပစ္စည်းကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ဈေးပေါလွန်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုတွေကိုမယုံကြည်ပါနဲ့။ "security measures"အကြောင်းမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ipivi.com isafree local classifieds site. Sell anything from used cars to mobiles, furniture, laptops, clothing and more. Submit ads for free and without creating an account.If you want to buy something - here you will find interesting items, cheaper than in the store. Start buying and selling in the most easy way on ipivi.com
© 2018 ipivi